Momba anay - Handan Yanzhao Fastener Manufacturing Co., Ltd.
Handan Yanzhao Fastener Manufacturing Co., Ltd no mpanamboatra fasteners, miaraka amin'ny tantaran'ny vokatra sy ny hatsaran'ny serivisy hatramin'ny 1981.Ny rafitra fitantanana kalitao dia ISO 9001: 2015 ISO14001: 2015 ary OHSAS18001: 2007 voamarina. Miaraka amin'ny fanoloran-tena hamitana fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanolorana vokatra marobe sy serivisy ao an-trano, Handan Yanzhao Fastener Manufacturing Co., Ltd dia nanjary mpamatsy fastener lehibe anisan'izany: Indostrian'ny fanorenana, fanamboaran-dàlana, indostrian'ny harena ankibon'ny tany, famokarana mekanika, fanamboarana lamba sns ..
Handan Yanzhao Fastener Manufacturing Co., Ltd, izay orinasa maoderina R&D matihanina ary famokarana bolt, voanjo, mpanasa lamba, visy, baoty roa loha, boloky ny vatofantsika ary tsorakazo sns. Mifantoka amin'ny fenitra DIN, ASMI, BSW, JIS, GB .
Handan Yanzhao Fastener Manufacturing Co., Ltd dia mirehareha amin'ny zon'izy ireo manafatra tena sy manondrana navoakan'ny governemanta PRC. ny taratasy fanamarinana kalitao tsara any amin'ny faritanin'i Hebei, orinasa ara-barotra malaza any Handan, ary orinasa kely mifototra amin'ny haitao sy faritany Hebei, ny orinasa dia mitarika eo amin'ny indostria, manana tatitra momba ny fitiliana ara-pitaovana, tohana ihany koa ny famokarana.
Ny orinasan-tsika dia manana fitaovana mandroso eto an-toerana, teknisianina tena tsara ary rafitra fanamafisana kalitao vokatra azo antoka; mandany fomba famokarana iray -stop mba hitantanana henjana ny kalitaon'ny vokatra, mba hitombo hatrany ny haben'ny vokatra eny an-tsena, ary hihatsara haingana ny endrika sosialy. Ny vokatra vokarinay dia nahazo laza eo amin'ny mpanjifa.
Misaotra anao tamin'ny asa nataonao. Ankafizinay ny fotoana azo hanompoana anao.
horonan, Hex Bolts mahery, Hexagon Socket Head Bolts, Boloky Hex Bolts mainty, Bolida heksim-by hex mainty, Din6921 Flange Nuts,